BCHT Changchun မြင့်နည်းပညာစက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအိမ်ခြံမြေ (Group မှ) ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်မတ်လ 2004 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဇီဝနှင့်မူးယစ်ဆေးသုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စေ့စပ် high-tech လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ BCHT ယခုစုစုပေါင်း 235.000 စတုရန်းမီတာကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့လေးယောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုင်ဆိုင်နှစ်ယောက် R & D ကို 5000 စတုရန်းမီတာကျော်ဒေသများအတွက်အများဆုံးတပ်ဆင်ထားဓါတ်ခွဲခန်းများနှင့်လေယာဉ်မှူးအပင်နှင့်အတူကာကွယ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့အစင်တာ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ဘို့, company`s R & D ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသန်း 120 ကျော်ယွမ်ကိုကျော်လွန်နေပါသည်။ 2008 ခုနှစ်တွင် BCHT အောင်မြင်စွာရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတရုတ်နိုင်ငံ,...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး PFS ၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ လူ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး (Vero ဆဲလ်) ၏ထုတ်ကုန်များ pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေး Attenutated pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေး Lyophilized pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေး Attenutated Lyophilized pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Lyophilized pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေး Lyophilized တိုက်ရိုက် pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေး Lyophilized Attenutted ရေကျောက်တိုက်ရိုက်များအတွက် PFS ကာကွယ်ဆေး PFS ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Lyophilized Attenutated PFS ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated Lyophilized PFS ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized Attenutated တိုက်ရိုက် ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized ၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Attenutated ၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ ရေကျောက်များအတွက်ကာကွယ်ဆေး ရေကျောက်များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk လူ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး (Vero ဆဲလ်) ၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized ၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation ၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated ၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation တိုက်ရိုက်၏ bulk ရေကျောက်များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက်တိုက်ရိုက် ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် Lyophilized Attenuated ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက်တိုက်ရိုက် Lyophilized ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက်တိုက်ရိုက် attenuation ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် Lyophilized attenuation ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် Lyophilized attenuation တိုက်ရိုက် ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized ၏ bulk ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation ၏ bulk
လူ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (Vero ဆဲလ်) လူ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (Vero ဆဲလ်) ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး၏ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ လူ့အသုံးပြုမှုပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များအတွက်ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး လူ့အသုံးပြုမှုထုတ်ကုန်များအတွက်ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (Vero ဆဲလ်)
ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အခွေးရူးကာကွယ်ဆေး၏ bulk ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး Vero ၏ bulk ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး (Vero ဆဲလ်) ၏ bulk လူ့အသုံးပြုမှု Vero ဆဲလ်များအတွက် bulk ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Lyophilized ၏ bulk
1.0 ml Per ဖလားကို
12 လ၏ခေတ် မှစ.
အလင်း မှစ. Protected
3.3 က LG မှ PFU ထက်မနည်း
BH-2 တည်ငြိမ်မှု Dopting
bulk တိုက်ရိုက် Lyophilized
အမြင့် Titer attenuation Bioproducts
ရေကျောက် attenuation Bioproducts
Changchun BCHT ဇီဝနည်းပညာ Co.
အသား Im အုပ်ချုပ်ရေး
အဆိုပါ White က Fluey တောင့်
ဇီဝနည်းပညာ Lyophilized attenuation
ရေကျောက်-zoster Virus ကို Oka strain
ရေကျောက်အမြင့် Titer Bioproducts
လူ့ Diploid ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု
Adjuvant မှစ. gelatin ၏ဖယ်ရှားရေး
IU သည် 2.5 ထက်မနည်းအာနိသင်
အဆိုပါဖလားကို 0.5 ml အရည်င်
ဇီဝနည်းပညာ Lyophilized အမြင့် Titer
bulk gelatin အခမဲ့ Long ကသက်တမ်းကာလ
bulk တိုက်ရိုက်နောက်ဆုံး bulk
ကာကွယ်ဆေးထိုး Bioproducts ဆေးပညာ
1.0 ml Per လူပျိုလူ့ဆေးသောက်ရန်
ရေကျောက်-zoster Virus ကိုအသကျရှငျ
ဘိုင်အိုဆေးဝါး Bioproducts ဆေးဝါး
Injection ကိုများအတွက် Diluent မြုံရေ
Long ကသက်တမ်းကာလ Lyophilized အမြင့် Titer
Long ကသက်တမ်းကာလ Lyophilized ရေကျောက်
အမှောင်ထဲမှာအေး Chain နှင့်အတူ
ရေကျောက် attenuation အမြင့်အာနိသင်
Trehalose လူ့ Albumin ဆိုဒီယမ်အချိုမှု
အမြင့် Titer attenuation ကာကွယ်ဆေးထိုး
Microcarriers အပေါ်ယဉ်ကျေးမှု Vero ဆဲလ်
gelatin အခမဲ့ Long ကသက်တမ်းအမြင့် Titer
ရေကျောက် gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက်
ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များ attenuation Bioproducts
Lyophilized ရေးဆွဲအတူနှိုင်းယှဉ် Effect
ရေကျောက် Long ကသက်တမ်းကာလဆေးပညာ
ဇီဝနည်းပညာ Long ကသက်တမ်းကာလ attenuation
gelatin အခမဲ့ Bioproducts ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
Long ကသက်တမ်းကာလအမြင့် Titer နထေိုငျ
ရေကျောက် Zoster ဗိုင်းရပ်စ်နထေိုငျ
ဇီဝနည်းပညာ Long ကသက်တမ်းကာလဇီဝဗေဒ
Bioproducts Semifinished ကုန်ပစ္စည်းများဆေးပညာ
ကာကွယ်ဆေး attenuation ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
ဘိုင်အိုဆေးဝါး Long ကသက်တမ်းဇီဝဗေဒ
ကာကွယ်ဆေးထိုး Bioproducts အမြင့်အာနိသင်
ကြိုတင်ကာကွယ်မှု Bioproducts ကနျြးမာရေး
ဇီဝနည်းပညာ Long ကသက်တမ်းကာလအမြင့် Titer
ဗိုလ်လုပွဲ Long ကသက်တမ်းကာလအမြင့် Titer
ဘိုင်အိုဆေးဝါး Lyophilized အမြင့်အာနိသင်
ဘိုင်အိုဆေးဝါး Lyophilized ကာကွယ်ဆေးထိုး
ရေကျောက်ဆန့်ကျင် active ကာကွယ်ဆေးထိုး
ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များမြင့်မား Titer Bioproducts
ဇီဝနည်းပညာ Lyophilized ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များ
ကာကွယ်ဆေးအမြင့် Titer ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
ကာကွယ်ဆေးထိုး Bioproducts Semifinished ထုတ်ကုန်များ
Finished ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက် Long ကသက်တမ်းကာလ
ကြိုတင်ကာကွယ်မှု gelatin အခမဲ့ကနျြးမာရေး
ဇီဝနည်းပညာ Lyophilized ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
ဘိုင်အိုဆေးဝါး Lyophilized ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
Attenuated Lyophilized တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး
ဘိုင်အိုဆေးဝါးအစုလိုက် Long ကသက်တမ်းကာလ
အမြင့်အာနိသင် Attenuated ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များ
ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များ attenuation ကာကွယ်ဆေးထိုး
ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက် Long ကသက်တမ်းကာလဇီဝဗေဒ
တစ်ဦးကိုထိနျးသိမျးထားသကဲ့သို့ Thimerosal ဆံ့
Long ကသက်တမ်းကာလ Lyophilized ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ
ကြိုတင်ကာကွယ်မှု gelatin အခမဲ့အမြင့်အာနိသင်
Bioproducts Semifinished ထုတ်ကုန်များကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
Bioproducts Semifinished ထုတ်ကုန်များမြင့်မားသောအာနိသင်
ယဉ်ကျေးမှု Process ကိုကောင်းပြန်လုပ်ရှိထားသည်
ဘိုင်အိုဆေးဝါး gelatin အခမဲ့နောက်ဆုံးအစုလိုက်
ပုံခပ်ဆင် detect နိုင်ငံခြားရေးမှုန်များမပါဘဲ
အကြီးစား Scope ကာကွယ်ဆေးထိုးဘို့အသင့်လျော်သော
ဗိုင်းရပ်စ်ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား Lyophilized ဖြစ်ပါသည်
ကိုလက်စသတ်ကုန်ပစ္စည်းများ attenuation ကာကွယ်ဆေးထိုး
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဘိုင်အိုဆေးဝါး Long ကသက်တမ်းကာလ
ထုတ်ကုန်များမြင့်မား Titer ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဆုံး
ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ Bioproducts Finished
ရေကျောက် Zoster ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင် Immuno လှုပ်ရှားမှု
ကာကွယ်ဆေးထိုး Semifinished ထုတ်ကုန်များကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
ကိုယ်ပိုင် IP ကိုခငြ့်အရေးနှင့်အတူ BH-2 တည်ငြိမ်ရေးကို
ကာကွယ်ဆေးထိုး Semifinished ထုတ်ကုန်များမြင့်မားသောအာနိသင်
အေး Chain နှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်
ကာကွယ်ဆေးထိုး Bioproducts ကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
gelatin အခမဲ့ Long ကသက်တမ်းကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ဆေးပညာ Prefilled ဆေးထိုးအပ်ကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ရေကျောက် Long ကသက်တမ်းကာလကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Changchun BCHT Biotechnology Co. All rights reserved ။ မှပံ့ပိုးသည်